Remax RM-303 Earphone သည် နားထောင်သမျှသီချင်းတွေတိုင်း အသံကြည်လင်ပြတ်သားမှုအပြည့်အ၀ ခံစားရမယ်။ မူလဒီဇိုင်း နဲ့ ကျဆင်းမသွားတဲ့အသံ အရည်အသွေးက လူကြိုက်များအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ဆဲပါပဲ..နားသက်သာတဲ့ ဖော့စွပ် အပိုလေးပါလက်ဆောင် ပါသေးတော့ လုံးဝ ကြွေစရာလေးပေါ့.သံစဉ်တွေနဲ့အတူ မျောပါသွားစေမယ့် ခံစားချက်ကိုပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ Remax RM-303 Earphone ကိုအခုပဲ Online ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် ဝယ်ယူလိုက်ကျပါစို့။
Remax RM-710/712 Gaming Earphone
Remax RM-710/712 Gaming Earphone နဲ့ RP Skin တွေယူမယ် Season Skin တွေယူမယ် အပီကြမ်းမယ် အပီဆွဲမယ် ဆိုတဲ့ ဘော်ဘော်တွေအတွက် ဒီတိုင်းကြမ်းလို့ ဆွဲလို့ မရဘူးနော် နားကြပ်ကောင်းကောင်းလေးတော့လိုမယ် Remax RM-710/712 Gaming Special Earphone လေးနဲ့ဆိုရင် အပီကြမ်း အပီဆွဲလို့ရမှာနော်။နောက်ပြီး ဖြုတ်တပ်လုပ်နိုင်တဲ့ Flexible Mic ကောပါလို့ ကိုယ့်ရဲ့ Teammateတွေနဲ့ အချိတ်အဆက်မိမိ ချိတ်ဆက်ပီး ရှယ်ပစ်ခတ်လို့ရပြီပေါ့.....
Remax RM-330 Earphone
Remax RM-330 Earphone ကတော့ လက်မှာFancyကြိုးအနေနဲ့ ပတ်ထားလို့ရသလို သီချင်းနားထောင်မယ်ဆိုရင်လည်း ဖြည်ပြီးနာမှာတပ်လိုက်ရုံပဲနော် ။Gamer တွေအတွက် အရမ်းအဆင်ပြေတဲ့ ၄၅ဒီဂရီ အချိုးနားကြပ်ခေါင်း လေဒီတို့အကြိုက် ပန်းရောင်၊ ပုံမှန်လူတွေအကြိုက် အနက်ရောင် နှင့် အစိမ်းရောင် သုံးရောင်လာပေးထားပါတယ်။
Remax RM-620 Earphone
Remax RM-620 Earphone သည် 12mm Diver Unit ဖြစ်တဲ့အတွက် MeagaBass အသံထွက်ကို Detail ကျကျခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းခံပြီး ဒီဇိုင်းဆန်းတဲ့ကြိုးသားကြောင့် စွဲမက်သွားစေမယ့်အပြင် ပေါ့ပါးခိုင်ခံ့တဲ့ Aluminum သတ္တုအုံကလည်း နားမှာတပ်ရတာလုံ၀စိတ်တိုင်းကျစေမှာပါ။
Remax RM-501 Earphone နဲ့ အလန်းစား Dj beats သံတွေ၊ အကြမ်းခံသည့် နားကြပ်ခေါင်းအပြင် 90အချိုး ဒီဇိုင်းမို့လို့ လူကြီးမင်းတို့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေမှာပါ။ ဒါအပြင် အိတ်ထဲကနေဖုန်းထုတ်စရာမလိုဘဲဖုန်းကိုင် ဖုန်းချလုပ်နိုင်သည့်အပြင် သီချင်းနားထောင်ချင်တဲ့အခါမှာလည်း အဖွင့်၊အပိတ်၊အပုဒ်ကျော်တာတွေကိုခလုပ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပြုလုပ်နိုင်တာကြောင့် အရမ်းမိုက်တဲ့နားကြပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Remax RM-535 Earphone နဲ့ Bass သံပြင်းပြင်းနဲ့နားထောင်မလား၊ Classic Song လေးတွေပဲနားထောင်မ လား ကောင်းမွန်တဲ့အသံထွက်ရယ် ကြည်ကြည်လင်လင်နားဆင်နိုင်မယ့်အပြင် High Quality TPE Material နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ကြိုးပြားဒီဇိုင်းနဲ့ဆိုတော့အားလုံးကြိုက်ကျမှာသေချာပါတယ်။အရောင်ကတော့ အနီရောင်၊ အဖြူ ရောင်၊ အမဲရောင် သုံးရောင်လာပါတယ်။
Remax RB-M40 Bluetooth speaker
Remax RB-M40 Bluetooth speaker သည် bluetooth အကွာအဝေး 10m အထိကွာဝေးနိုင်ပါသည်။Bluetooth Frequency:40Hz -17KHz ဖြစ်သောကြောင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံကိုရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။Battery အနေဖြင့် 2000mAh ဖြစ်သဖြင့်အချိန် ကြာမြင့် စွာအသုံးခံမည်ဖြစ်ပါသည်။
Remax RM-580 Earphone
Remax RM-580 Earphone ကတော့ Speaker ၄လုံးနဲ့မို့ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အသံထွက်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နားကြပ် ဂျပ်ပင် ထိပ်ခေါင်းကို Aluminium+Cu Alloy material နဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ Mutifunctional Control Buttons သီချင်းအဖွင့် အပိတ် အသံအတိုးအချဲ့ ဖုန်းကိုင်၊ဖုန်းချ ကြိုက်သလိုလုပ်နိုင်တဲ့အပြင်.. Noise-Reduction HD Microphone ပါလို့ ဖုန်းပြောလို့ အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RM-502 Earphone
Remax RM-502 Earphone သည် စျေးတန်တန်လေးနဲ့ Hi-Fi စနစ်လေးပါတဲ့ Earphone လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူကသီချင်းအပုဒ်ကျော်တာတွေ ဖုန်းကိုင် ဖုန်းချ လုပ်လို့ရတဲ့အပြင် နားနဲ့အလိုက်သင့်ဖြစ်အောင် Speaker အုံကို ၄၅ဒီဂရီ စောင်းပေးထားပြီး ဂျပ်ပင်ခေါင်းကလဲ ၉၀ဒီဂရီ အချိုးဆိုတော့ ကြိုးလွယ်လွယ်မပျက်တော့ဘူးပေါ့။Colour တွေကလဲ၆ရောင်လာထားတာဆိုတော့ လူကြီးမင်းတို့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေမှာပါ။
Remax RB-X5 Bluetooth Speaker
အိမ်မှာ အနားယူရင်း သီချင်းလည်းဆိုမယ်ဆိုရင် ဒီ Remax X5 Outdoor Bluetooth Speaker လေးက အကောင်းဆုံးထဲက တစ်ခုပါ။ Super Bass အသံစနစ်ကိုမှ Wireless Mic 2လုံးပါဝင်ပြီး Bluetooth , SD card , USB stick တွေနဲ့လည်း အသုံးပြု လို့ ရပါတယ်. Bass တွေ Treble အသံတွေကိုလည်း ချိန်ညှိလို့ရတဲ့ အပြင် ဘက်ထရီအားကလည်းကြာရှည်ခံ မို့ -အလန်းစား Bluetooth Box လေးတခုပဲဖြစ်ပါသည်။
Remax RB-M28 Portable Bluetooth Speaker
Remax RB-M28 Portable Bluetooth Speaker လေးကတော့ 8watt speaker နှစ်လုံး​​​ဖြစ်တဲ့အပြင် TWS mode လေးပါ ပါဝင်တော့ အသံထွက်က လုံးဝမိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရေစိုဒဏ်ကို ခံနိုင်မယ့် IPX7 Level ပါဝင် မှာ ဖြစ်ပါတယ်။RGB Lightလေးရဲ့ ရောင်စုံမီးလေးနဲ့ဆိုတော့ ပါတီတစ်ခုကို ရောက်နေသလားပဲ…….(အသုံးမပြုချင် ရင်လည်း ပိတ်ထားလို့ရသေးတယ်နော်) 3600mAh battery capacity ကြီးနဲ့ဆိုတော့ တစ်ခါအားသွင်းထားရုံနဲ့ 8hours အထိ အသုံးခံမှာဖြစ်ပါတယ်။Bluetooth Version 4.2 နဲ့ ကြည်လင်ပြတ်သားသော အသံကိုရရှိစေမည်ဖြစ် ပါသည်။
Remax RB-S27 Bluetooth
Remax RB-S27 Bluetooth သည် Bluetooth Version 5.0 နှင့် 6mm Dynamic Speaker ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ဖုန်းပြောတဲ့အခါ နှင့် သီချင်းသံကိုကြည်ကြည်လင်လင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။IPX7 Level Waterproof လဲဖြစ်လို့ အတော်အသင့် ရေစိုခံ၊ ချွေးစို ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။အား၂နာရီအပြည့်သွင်းထားမယ်ဆိုရင်လဲ ၁၀နာရီကြာအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RM-510 Earphone လေးကတော့ပြောစရာမလိုလောက်အောင် စွဲမက်စရာဒီဇိုင်းနဲ့ဖြစ်စေလို့ မြင်တာနဲ့ငြင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပျိုမေတို့အကြိုက် အရောင်ဆန်းလေးတွေ နှင့် ကိုကိုတို့အကြိုက် အဖြူရောင်နှင့်အနက်ရောင် လဲလာတာမို့ အခုပဲသံဗူးနားကြပ်ကိုဝယ်ယူရင်း သီချင်းသံလေးကို Bass သံကောင်းကောင်းနဲ့နားထောင်လိုက်ရအောင်။
Remax RP-U14 Micro Charger
Remax RP-U14 Charger လေးနဲ့အားသွင်းကြမယ် တာရှည်လည်းခံမယ် စျေးလည်းတန်မယ်၊ အာမခံလည်းပါမယ်၊ အားဝင်လည်းမြန်မယ်ဆိုရင် လူကြီးမင်းတို့သဘောကြမှာပါ။ဒါ့အပြင် 5V/2.4 အပြည့်ထွက်ပေးပြီးတော့ Data ရတဲ့အားသွင်းကြိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။ RP-U14 Charger ဟာဆိုရင် Micro/ Type-C/ i Phone သုံးမျိုးလာပေးထားပါတယ်။
Remax RC-153 Share Charging Cable
Remax RC-153 Share Charging Cable လေးရဲ့Share6in 1 Charging Cable ကတော့အိမ်မှာ မိသားစုတွေ အားသွင်းကြိုးလုနေရရင် တစ်ကြိုးတည်းနဲ့ တစ်အိမ်လုံး သုံးနိုင်တဲ့ဒီ Share6in 1 Cable လေး ဆောင်ထားလိုက်တော့ဗျာ..
Remax RB-M53 Mini wireless speaker
Remax RB-M53 wireless speaker သည်သေးငယ်သောကြောင့် သယ်ကူရလွယ်ကူစေသလိုအသံထွက်အားကောင်းစေမွန်စေပါသည်။Battry အနေဖြင့် 530mAh ဖြစ်သဖြင့်ကြာရှည်ခံသော Battery ဖြစ်သဖြင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာ နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
Remax RM-625 Earphone
Remax RM-625 Earphone နဲ့ အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတွေကို ဖွင့်ရင်းပျင်းစရာကောင်းတာတွေကိုအဝေးဆုံးထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ အသံ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ အပြင်သက်တောင့်သက်သာအရှိဆုံးဖြစ်အောင် နားကြပ်ခေါင်းလေးကို Silica Type နားအစွပ်လေးနဲ့မို့အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါသည်။
Remax TWS-6 Wireless Earbuds
Remax TWS-6 Wireless Earbuds ကတော့ အသံအရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးတော့ သက်တောင့်သက်သာရှိလို့ လူကြီးမင်းတို့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေမှာပါ။ အားသွင်းချိန်၁နာရီခွဲနဲ့ ၂နာရီဆက်တိုက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။သီချင်းနားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ ၃နာရီအထိအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အားသွင်းဗူးလေးနဲ့ နားကြပ်တွေကို ၃ ကြိမ်လောက် ပြန်ပြီးအားသွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RPP-154 30000mAh Power Bank
RPP-154 Power Bank လေးကတော့ Battery အနေနဲ့ 30000mAh ပါဝင်တာကြောင့် ဖုန်းနဲ့ အလုပ်များများလုပ်ရသော လူကြီးမင်းတို့အတွက် အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ ပစ္စည်းလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ USB ပေါက် လေးပေါက်ပါဝင်တဲ့အတွက် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖုန်းလေးလုံးလောက်သွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RM-588 Ear Phone
Remax Earphone လေးသည် ခေတ်မှီသော ဒီဇိုင်းပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ကြားရမည့်အသံပိုင်းမှာလည်း ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိ၍ ကောင်းမွန်စွာ နားဆင်နိုင်သောကြောင့် မိမိ အိပ်စက်အနားယူသည့် အချိန်တွင်လည်း အဆင်ပြေစေမည့် နားကြပ်လေးပင်ဖြစ်သည်။
Remax RM-208 Sleep Earphone
တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသော eartips ပါရှိပြီး siliconeဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် နားကိုသက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံများကိုလျှော့ချပေးသော eartips တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် gamerများနှင့် သင်တော်သည်။ strong super bass စနစ်ဖြစ်သောကြောင့် bass သံကို ကောင်းစွာနားထောင်နိုင်ပါသည်။
Remax RM-533 Type-C Earphone
RM-533 လေးဟာ Remax ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Type-C earphone လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ bass studio နှင့် Ergonomic ပုံစံ shocking ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဖန်တီးထားပါတယ်။ silicone eartipsကြောင့် ကြာရှည်စွာဝတ်ဆင်နိုင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှဆူညံသံများကိုလည်း လျှော့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RM-725 Wired Single Earphone
Remax ကထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့ RM-725 Wired Single Earphone လေးမှာတော့ ရော်ဘာအစွပ်ကလေးတွေနဲ့ ဖြစ်လို့ အသုံးပြုနေစဉ် နားနာကျင်မှုတွေ မဖြစ်စေပဲ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ ကြည်လင် ပြတ်သားတဲ့ သံစဉ်တွေ နားဆင် ခံစားနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Remax RCC228 Lindo 18W Car Charger
ကားမောင်းရင်းအားသွင်းဖို့အတွက် Car Charger တစ်ခုလိုနေတယ်။ အားပြည့်တာလည်း မြန်အုံး မှ ပေါပေါပဲပဲ အရည်အသွေး မကောင်းတာတွေလည်း ကြိုက်ဝူး။ Quality လေး Brand လေး ကောင်းအုံးမှ။ Aluminium ဆန်တာလေး လိုချင်တာ...ဒါဆိုရင်တော့ Remax ရဲ့Car Charger လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ Over-heated ၊ over-current ၊ over-charging မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ခေတ်မှီ ဆားကစ်များဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ တကယ်ကို Compact Design ဖြစ်တဲ့အပြင် အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီး သယ်ရဆောင်ရ လွယ်ကူတဲ့ Car charger လေးတစ်ခုပေါ့ဗျာ။
Remax RC-087i Lighting Cable
Remax RC-087i Lighting Gaming Data Cable လေးကတော့ Gamer တို့အကြိုက် Janker Data Cable Gaming Handle ပိုမို ကောင်းမွန်စေဖို့ 90° USB ခေါင်းချိုး နဲ့ အားအဝင် အမြန်ဆုံး 3A Current ဆိုတော့ ကြိုးသား ပူခြင်း မရှိဖို့ အာမခံတယ်ဗျို့..ကြိုး အရှည် ၁.၂ မီတာ ဖြစ်ပြီး iPhone အတွက် ရနိုင်ပါပြီ..ကြိုးသားကျစ်လစ်ပြီး Warranty လည်း ၆လပါတာမို့ လူကြီးမင်းတို့အကြိုက် တွေ့စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RC-128 Giri2in 1 Charging Cable
Remax RC-128 Giri2in 1 Charging Cable လေးကတော့ i Phone သုံးသူများအတွက် ဖုန်း၂လုံးအားသွင်းချင်တယ် အားသွင်းကြိုး၂ချောင်းလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ လူကြီးမင်းတို့သဘောကျစေမှာဖြစ်ပါတယ်.....Warranty 6months ပါတာဆိုတော့စိတ်ချလက်ချအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RCC-217 (3in1) Rocket Car Charger
Remax RCC-217 Car Charger မှာတော့ 2USB ပါဝင်ပြီး Output 5V-2.4A နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် အားဝင်လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RC- 135L Type-C to Lighting Data Cable
ပန်းသီး Users တွေအတွက် အားသွင်းတာနဲ့ Data ကူးတဲ့ အပိုင်းတွေမှာအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်စေမဲ့ REMAX ရဲ့ From Type - C to Lighting Cable တစ်ခုဖြစ်တဲ့RC - 135L Data Cable လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ RC - 135L လေးဟာ 18W နဲ့လာပေးထားပါတယ်။
Remax RCC230 4.8A Car Charger
Remax ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Car charger လေးကတော့ အားသွင်းရုံတစ်မျိုးထဲ မဟုတ်ဘဲ Mp3 Mp4 Bluetooth များပါချိတ်ပြီးသီချင်းဖွင့်လို့ရတဲ့ ပစ္စည်းဆန်းလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Quality ကောင်းကြောင်းတော့ အထွေအထူးပြောစရာ မလိုတော့ပါဘူး Remax သုံးဖူးသူတိုင်းသိကြမှာပါနော် 6months warranty ပါလို့စိတ်ချလက်ချ သုံးလို့ရပါတယ်...။
Remax RC-094CL Kerolla Type C to Lighting Data Cable
Remax RC-094CL လေးကတော့ အထဲမှ Wire များကို သံဖြူဖြင့်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ကြိုးကို ချည် သားဖြင့်ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့အတွက် အကြမ်းမခံမှာကိုတော့စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာ။
Remax RM-805 Wired Headphone
Remax RM-805 Wired Headphone သည် မိမိ၏နားကိုမထိခိုက်စေဘဲ ကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ခေါက်ချိုးသုံးလို့ရနိုင်သဖြင့် အသုံးပြုရအဆင်ပြေစေနိုင်ပါသည်။ သီချင်းနားထောင်သည်ဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းပြောခြင်းဖြစ်ဖြစ် ကြည်လင်ပြတ်သားမူကိုရရှိနိုင်ပြီး အသံလုံစေမူကိုလည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
Remax RM-C16 Tablet Holder
Remax RM-C16 Tablet Holder စာဖတ်မလား video call ပဲပြောမလားNetflix နဲ့ chill မလား..ကဲဗျာ..Live လွှင့်ဈေးရောင်း ချင်သေးလား..ကိုယ့်ရဲ့ Tablet ကို မငြီးမငြူကိုင်ထားပေးမယ့် REMAX ရဲ့ Tablet Holer လေး ပြန်ရောက်လာပါပြီ..လို့..7'' ကနေ 15'' ထိ ဘယ် Tablet မဆို တင်လို့ရပြီး ​360° စိတ်ကြိုက် လှည့်သုံးလို့ရတဲ့ အပြင်​နေရာရွေ့သွားတာမျိုးမဖြစ်အောင် အောက်ခြေမှာ Silicone Pad လေးလဲသုံးပေးထားတယ်နော်..High Strengthen ABS Material ကြောင့် အကြမ်းခံမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RL-LA09 Fonshion Audio Jack Splitter
Remax RL-LA09 Fonshion Audio Jack Splitter လေးကတော့ရိုးရိုး နားကြပ် တွေနဲ့ တွဲသုံးဖို့အတွက် အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အားသွင်းခြင်း ၊သီချင်းနားထောင်ခြင်းများကို တစ်ပြိုင်ထဲလုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RL-LA08 3.5MM & Lighting Audio Adapter
Remax RL-LA08 3.5MM & Lighting Audio Adapter နားကြပ်ပေါက် မပါတဲ့ အိုင်ဖုန်းတွေအတွက်အမိုက်စား3in 1 #Audio_Adaptorနားကြပ်ပေါက်မပါတော့ ဂိမ်းကစားနေတုန်း အားကုန်သွားရင်အားသွင်းရတာ အဆင်ပြေဘူး ဆိုတဲ့ ဂိမ်းမာတွေအတွက်ဂိမ်း ကစားရင်း အားသွင်းမယ်နားကြပ်လည်းတပ်ထားလို့ရတယ် နောက်ပြီး ဇာတ်ကားကြည့်ရင် ဖုန်းကို ထောင်ပြီးကြည့်လို့ရတယ့် Stand လေးလည်းပါတယ် အာ့ Stand ကွင်းလေးက ဖုန်းမပြုတ်ကျအောင်ထိန်းထားလို့ရတယ်။ ဒီလို တကယ့်ကို အသုံးတည့်တဲ့3in 1 Audio Adaptor လေး180degree ကွေးညွတ်နိုင်တဲ့ ကြိုးသားမီးအားဝင်မဝင် ပြပေးတဲ့ #LED_Indicator …ဒီဟာနဲ့ဆို နားကြပ်ပေါက်မပါပဲ အထာကျလို့ရပြီပေါ့ …
Remax RL-LA07 3.5MM & Lighting Audio Adapter
Remax RL-LA07 3.5MM & Lighting Audio Adapter လေးကတော့ အားသွင်းခြင်း သီချင်းနားထောင်ခြင်းကိုတပြိုင်နက် လုပ်နိုင်ခြင်း သေးငယ်သော Adapter ဖြစ်သောကြောင့် အလွယ်တကူယူဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။game ကစားရင်းအားသွင်းလို့ ရသောကြောင့် Gamer သမားများအတွက် ပိုအဆင်ပြေပါသည်။
Remax RB-725HB Wireless Headphone
Remax RM-725HB Wired Headphone သည် မိမိ၏နားကိုမထိခိုက်စေဘဲ ကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ခေါက်ချိုးသုံးလို့ရနိုင်သဖြင့် အသုံးပြုရအဆင်ပြေစေနိုင်ပါသည်။ သီချင်းနားထောင်သည်ဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းပြောခြင်းဖြစ်ဖြစ် ကြည်လင်ပြတ်သားမူကိုရရှိနိုင်ပြီး အသံလုံစေမူကိုလည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
Remax CK-01 Selfie Ring Light
Remax CK-01 Selfie Ring Light လေးကတော့ တစ်လုံးနဲ့ အားမရဘူး..သုံးလုံးလောက်မှ ကျေနပ်မယ် ဆိုတဲ့ လူကြီးမင်းတို့..REMAX World က ဖုန်း ၃ လုံး တပ်ပြီးTik Tok ကစား Live လွှင့်ဈေးရောင်းနိုင်တဲ့ Ring Light Stand လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
REMAX World က ထွက်ရှိလာတဲ့ TWS-21 Wireless Earbudsသေးငယ်‌ပေါ့ပါးပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူစေတဲ့အပြင်နားထဲမှာ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ကွက်တိကျတဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုးနော်..အားကုန်သက်သာစေတဲ့ Bluetooth 5.0HiFi Sound အသံထွက်စနစ်၊ ဆူညံမှုလျော့ချပေးပြီးကြည်လင်ပြတ်သားသော HD Mic ပါလို့ဖုန်းပြောရင် ကြည်တောက်ရှင်း..အားအပြည့်သွင်းထားရင်၄နာရီ ဆက်တိုက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး Standby ကို နာရီ‌ပေါင်း ၉၀ ထားနိုင်တဲ့အပြင်အားသွင်းကြိုးမလို လျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်တဲ့အားသွင်းခုံက သွားလေရာမှာ Power Bank နဲ့တိုက်ရိုက်အားသွင်းနိုင်လို့ အရမ်းမိုက်ပေါ့...
Remax RPP-149 10000mAh Power Bank
Power bank ကို အရည်အသွေးလည်းကောင်း ဈေးနှုန်းလည်းချိုသာ ရမယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးတို့အတွက် Remax ရဲ့ RPP-149 (10000mAh)လေးရှိပါတယ်....ဒီ power bank လေးဟာ ဗို့အားမှန်ကန်စွာ ထုတ်ပေးလို့ ဖုန်းတွေရဲ့ ဘက်ထရီသက်တမ်းကို ထိခိုက်စေခြင်း မရှိပါဘူး။ USB output နှစ်ခု ပါ၀င်တဲ့အတွက် ဖုန်းနှစ်လုံးကို တစ်ပြိုင်တည်း ဘေးကင်းစွာ အားသွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Remax RPP-20 15000mAh Power Bank
Battery Capacity 15000mAh အပြည့်..ဘက်ထရီပမာဏက LED Digital Display နဲ့တိုက်ရိုက် ပလပ်ထိုးပြီးအားသွင်းနိုင်လို့ PowerBank ကို အားသွင်းဖို့ ကြိုးရှာနေစရာမလိုတော့... Power Bank မှာ Type-C နဲ့ Lightning အားသွင်းကြိုး တွဲရက်ပါတဲ့အပြင် iPhone 8 ကနေ iPhone 11 Pro Max အထိဖုန်းအားလုံးကို နာရီဝက်နဲ့ အားတဝက်ပြည့်စေတဲ့ 18W PD Type-C input/outputQuick Charging စနစ်ပါတဲ့ ဖုန်းတွေအတွက် 18W QC3.0 USB outputထပ်ပြီး ပါသေးလို့ ဖုန်း ၄ လုံးကို တပြိုင်တည်းအားသွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်..Low Temperature Discharge Protectionက ဖုန်းထိခိုက်မှာ စိုးရိမ်စရာမလိုဘဲအားသွင်းရင်းနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ Phone Holder လည်း ပါသေးတယ်ဗျာ ....အကြမ်းခံပေါ့ပါးတယ် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတယ်..ဘက်စုံသုံးလို့ရတော့ အဆင်ပြေပီပေါ့....
" data-item-price="270,000 Ks" data-item-avail="" data-item-availdesc="">
Remax RTS-10 Bluetooth Speacker
အရမ်းလန်းတဲ့ အသံစနစ်နဲ့ သင့်အိမ် ဧည့်ခန်းကို ရုပ်ရှင်ရုံတစ်ခုကဲ့သို့ လှပတင့်တယ်စွာ ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ REMAX ရဲ့ RTS-10 SOUNDBAR HOME THEATER SET မိသားစုနဲ့ အပန်းဖြေချိန် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ကြည့်မလား....မြူးကြွတဲ့ ဂီတသံစဉ်များကို Bass သံပြင်းပြင်းနဲ့ နားဆင်မလား... PC Game များကို တကယ့်အပြင်က အသံထွက်လိုမျိုး ခံစားဆော့ကစားမလား...RTS-10 Home Theater Set လေးကို နေရာအကျယ်ကြီးပေးစရာမလိုပဲ ဧည့်ခန်း/ရုံးခန်း ထဲမှာ Smart ကျကျ အလှဆင်ထားရှိနိုင်ပါ ပြီ...အသံထွက်စနစ်ကို ပြောပြရရင်တော့ Bass နဲ့ Tremble အသံများကို အသေးစိတ် နားဆင် နိုင်ဖို့ 90W 5" Subwoofer Speaker တစ်လုံး ကို10W 1" Speaker2လုံးနှင့် 15W 2" Speaker အသေးများ ပေါင်းပေးထားသည့် Sound Bar တစ်လုံးနဲ့ တွဲဖက်ကာ DSP Fidelity Sound အသံထွက်စနစ်ထုတ်ပေးထားလို့ ရုပ်ရှင်ဗွီဒီယိုများကို တကယ့်အပြင်အတိုင်း ကြည့်ရှုခံစားရမယ့် အပြင်တေးသီချင်းများအတွက် လဲ တကယ့်တီးဝိုင်းတစ်ခု ရှေ့မှာ လာပြီးဖျော်ဖြေနေသလို ခံစားရမှာဖြစ်ပါသည်။
Remax RB-M33 Fabric Series Wireless Speaker
Remax RB-M33 Fabric Series Wireless Speaker သည် ကြိုးမပါပဲ ၂ လုံး ပြိုင်တူ ဖွင့်နိုင်တဲ့ TWS Function နဲ့အတူ 5Watt Dynamic Speaker ၂ လုံး ရဲ့ Frequency တစ်ခုချင်းစီ Detail ကျကျ ကြားနိုင်တဲ့ အသံထွက်နဲ့မို့ရုပ်ရှင် ကြည့်ဖို့ နဲ့ ဂိမ်းကစားဖို့ အရမ်း အဆင်ပြေပြီလေ..SD Card/ Memory Stick/ AUX Cable Input Function များ အပြင်4 နာရီ လောက် ဆက်တိုက် သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RPP-96 10000mAh Power Bank
Remax RPP-96 Lango 2USB 10000mAh Power Bank လေးကတော့ Input DC5V=2.0A ဖြစ်ပြီးတော့ Output DC5V=2.1A ပဲဖြစ်ပါတယ်။Power Bank ကိုအားပြန်သွင်းမယ်ဆိုရင်လည်း Micro/Type C ၂မျိုးသွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RM-595 Wired Earphone
Remax ရဲ့ RM 595 သည် စပီကာ (၄) လုံးပါဝင်တာကြောင့် HiFi စနစ်နဲ့ Bass အသံ ပြင်းပြင်းရှရှကိုနားထဲမှာ အပြည့် နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နားကြပ်ရဲ့ ကြိုးအရှည်လေးကတော့ 1.2M အထိရှည်ပါသည်။
Remax RU-S2 4USB3Power Socket
Remax RU-S2 4USB3Power Socket လေးကတော့ ပလပ်ခေါင်းပုံစံ အမျိုးမျိုး သုံးလို့ရတဲ့ Universal ပလပ်ပေါက် သုံးခု နှင့် ဖုန်းလေးလုံး တစ်ခါတည်း အားသွင်းလို့ရတဲ့ 5V,2.1A USB Output လေးခု ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံး Current 8A အထိ ဒဏ်ခံနိုင်ပြီး....အပူဒဏ် 750°C အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိလို့မီးဘေးအန္တရာယ် အတွက် ပူစရာမလိုတဲ့ ABS Plastic Material Body နဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပလပ်ခုံကို ကိုယ်လိုသလောက်အကွာအဝေး ယူသုံးလို့ရအောင် လုံလောက်တဲ့ ကြိုးအရှည်ကတော့ ၆ပေခွဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Remax RPP-162 50000mAh Power Bank
Remax RPP-162 50000mAh Mengine Power Bank လေးကတော့ ဖုန်း လေးလုံး တူတူ အားသွင်းဖို့ 10Watt USB Port လေးပေါက် ပါဝင်ပြီး Power Bank ကိုလည်း ဘယ်အားသွင်းကြိုး နဲ့မဆိုအားသွင်းလို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Battery ပမာဏ နဲ့ အားအဝင်အထွက် ကို Display နဲ့အဝင်အထွက် ခွဲပြပေးပြီးအမှောင်ထဲ အရေးပေါ် သုံးဖို့ LED မီး ပါဝင်ပါသေးတယ်။
Remax RPP-113 40000mAh Power Bank
Remax RPP-113 40000mAh Power Bank လေးကတော့ဖုန်းလေးလုံးတပြိုင်တည်းအားသွင်းလို့ရမှာဖြစ် ပြီး 5V/2.1A USB Port လေးခုပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Power Bank ကို အားပြန်သွင်းဖို့အတွက် Type-C/ Micro / Lightning USB Port သုံးခု နှင့် Battery % အတိအကျနဲ့ အားအဝင်အထွက်သီးသန့်ခွဲပြပေးတဲ့ Digital Display နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အမှောင်ထဲ အရေးပေါ် သုံးဖို့ LED Touchlight မီးမလောင်နိုင်တဲ့ အပူခံ ABS/PC Materialအသုံးပြု ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RPP-167 30000mAh Lango
Remax ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ RPP-167လေးကတော့ ပါဝါ 30000mAh ပါဝင်တာကြောင့် အားအကြာကြီးသွင်းပြီး သုံးလို့ရတဲ့ အပြင် ဖုန်းနှစ်လုံးကို တစ်ပြိုင်နက် အားသွင်းနိုင်မှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။2USB,Type-C,Micro, Lighting port လေးတွေနဲ့ပါ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Remax RPP-112 30000mAh Mengine
Remaxက ထုတ်တဲ့ RPP-112 လေးကတော့ ပါဝါ 30000mAh ပါဝင်တာကြောင့် ဖုန်းများကိုအားကြာကြာသွင်းနိုင်ပြီး 4USB,Type-C,Lighting,Micro Ports များပါဝင်တဲ့ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်
Remax RC-156M Micro Cable
Remax RC-156M Micro Cable သည် လျင်မြန်စွာ အားသွင်းနိုင်ရန်အတွက် 3.0A Max နှင့်မြန်နှုန်း 480mbps မြန်နှုန်းဖြင့် ဒေတာလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။
Remax RC-123 Type-C Data Cable
Remax RC-123 Type-C Data Cable သည် USB ကြိုးသို့ Lightning အားသွင်းရန်ကြိုး Smart Chip သည် ထုတ်လွှတ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ အတွင်းပိုင်းကြေးနီ ဝါယာကြိုးများသည် သာမန်ကြိုးများထက် ပိုကြီးပြီးပိုထူသည်။ အားသွင်းမြန်နှုန်းနှင့် အချက်အလက်ပို့လွှတ်မှုကို မြန်ဆန်စေသည်။
Remax RC-011 Share Series4in 1 Charging Cable
Remax မှ ထုတ်လုပ်သော RC-011 သည်4in 1 Charging Cable ဖြစ်ပါသည်။ C type to iPhone Lightning, C type to USB ကြိုးဖြစ်သောကြောင့် အသုံးဝင်သော ကြိုးလေးဘဲ ဖြစ်ပါသည်။
Remax RL-HM15 Suyun Series ADD Water Humidifier
Remax RL-HM15 Suyun Series ADD Water Humidifier လေးကတော့ ရေ (၁) လီတာအထိ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့အပြင် Buoyancy Ball လေးလဲ ပါဝင်တာကြောင့် ရေပမာဏအနည်း/အများကို လွယ်ကူစွာသိနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အငွေ့ထွက်နှုန်းကို (၂)မျိုး ပြောင်းသုံးနိုင်တဲ့အပြင် အမွှေးဆီကိုလဲ လွယ်ကူစွာ Refill ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ouch Function ပါဝင်တာမို့ Long Press, One Touch, Double Touch များနဲ့ Spray Setting နဲ့ Lighting Setting တွေကို ချိန်ညှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကြိမ်အသုံးပြုရင် (၁၂) နာရီအထိ ဆက်တိုက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အသံထွက်မှုနှုန်း 35 db သာရှိပါတယ်။
Remax RM-560 Type-C Earphone
Remax RM-560 Type-C Earphone လေးကတော့ သီချင်းကျော်မလား၊ ရပ်မလား၊ တိုးမလား၊ လျော့မလား အစုံလုပ်လို့ရ တဲ့ ခလုပ်တစ်စုံနဲ့နားကြပ်ခေါင်းကတော့ ၄၅ဒီဂရီအစောင်းဆိုပဲTPU ကြိုးပျော့ကို သုံးထားတာဆိုတော့ ကြိုးခေါက်ရာလည်းမ ထင်10mm Dynamic SpeakerMetal ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Material နဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ Bass အသံကိုလည်း အမြင့်ဆုံးခံစား နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RM-755 Type-C Earphone
Remax RM-755 Type-C Earphone လေးကတော့ ၄၅° အချိုး နားကြပ်ခေါင်းက နားစွပ်အပို ထပ်လဲလို့ရတော့ နားမနာ..Inner Ear Type ကိုမှ 3D Surround Sound ထုတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နားကြပ်ပေါက် မပါတဲ့ Type-C ဖုန်းတွေအတွက် သီးသန့် Edition နဲ့ဖြစ်တဲ့အပြင် Bass သံကောင်းကောင်းနဲ့ Extension Mic တစ်ခု ပါလို့ ပြောတဲ့ အသံတိုင်းကိုလဲကြည်ကြည်လင်လင်ပြတ်ပြတ်သားသား ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RPP-184 40000mAh Power Bank
Remax RPP-184 40000mAh Power Bank လေးကတော့ USB Output (3) ပေါက် ပါတော့ ဖုန်း နဲ့တခြား Gadgets တွေ အများကြီး သွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အားပြန်သွင်းတဲ့ အခါ iPhone / Micro / Type-C Input3ခုနဲ့ပြန်သွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။Battery Percent ကို Digital Display နဲ့ ပြပြီး ခိုင်ခန့် ပေါ့ပါးတဲ့ Fireproof PC Body သုံးပေးထားလို့ နေရာစုံယူသွားနိုင်ပြီး အကြမ်းခံပါတယ်..အမှောင်ထဲ အရေးပေါ် သုံးဖို့ မီးအိမ်ပါလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RP-W28 Wireless Charger(15W)
Remax RP-W28 Wireless Charger(15W) လေးကတော့ Smart IC Chip ပါဝင်လို့ သင့် iPhone 12 ရဲ့ Battery ထိခိုက်မှာ မစိုးရိမ်ရပဲ စိတ်ချလက်ချ အားသွင်းနိုင်မှာပါ..Output 15 Watt ဖြစ်တဲ့အတွက် Fast Charge စနစ် ထောက်ပံ့ပေးပြီး ကပ်အားကောင်းတဲ့ သံလိုက်နဲ့ မို့ အားသွင်းချိန် ပြုတ်ကျမှာလည်း စိတ်မပူရဘူးပေါ့..15 Watt ဖြစ်ပေမယ့် အရင် 5Watt/ 10Watt Wireless Charging စနစ်ပါတဲ့ ဖုန်းတွေနဲ့လည်း သုံးနိုင်တဲ့အပြင် Type-C Cable နဲ့ လာတဲ့အတွက် Quick Charge အထောက်အပံ့ပြု အားသွင်းခေါင်းများနဲ့ တွဲဖက်သုံးလို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RPP-173 60000mAh Power Bank
Remax မှ လောလောလတ်လတ် အသစ်ထွက်ရှိထားသောLinze Power Bank သည် ပါးပါးလေးနဲ့သေးသေးလေးဆိုတော့ အားသွင်းရတာလည်း လွယ်ကူသည့်အပြင် သယ်ယူရတာလည်းအဆင်ပြေအမှန်အကန် အသုံးတည့်ပါသည်။
Remax RPP-185 50000mAh Power Bank
MAh များများ လိုချင်တယ်..အရမ်း လေးတာလည်း မကြိုက်ဘူး ဆိုရင်အသစ်ထွက် Remax Power Bank လေးရွေးစေချင်တယ် ... USB Output (3) ပေါက် ပါတော့ ဖုန်း နဲ့တခြား Gadgets တွေ အများကြီး သွင်းနိုင်ပါတယ် . အားပြန်သွင်းတဲ့ အခါ iPhone / Micro / Type-C Input3ခု ထည့်ပေးထားလို့ကြိုးလည်း မရွေးတော့ဘူးပေါ့.. Battery Percent ကို Digital Display နဲ့ ပြပြီးခိုင်ခန့် ပေါ့ပါးတဲ့ Fireproof PC Body သုံးပေးထားလို့နေရာစုံယူသွားနိုင်ပြီး အကြမ်းလည်းခံပါတယ်.. အမှောင်ထဲ အရေးပေါ် သုံးဖို့ မီးအိမ်လည်းပါပြီးလျှပ်စစ်မီးမရတဲ့ နေရာမျိုးတွေဆီ ရက်ကြာကြာ သွားနေရမယ့်သူတွေအတွက် အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်နော်...
Remax RPP-150 20000mAh Power Bank
Remax RPP-150 Power Bank သည် ဘက်ထရီ 20000mAh ပါဝင်ပြီးတော့ ..ဖုန်း ၂ လုံး တူတူ အားဖြည့်နိုင် ပြီးသူ့ကို Android / Type-C ဘယ်ကြိုး နဲ့မဆို ပြန်အားသွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်....Body လိုင်းဆင်းလေးတွေကြောင့် ကိုင်ထားရင် မြဲနေသလိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax TWS-10i True Wireless Stereo Music Earbuds
Remax TWS-10i သည် ပြင်ပဆူညံမှုကိုလျော့ချပေးပြီး HiFi Sound စနစ်ကြောင့် အသံအရည်အသွေးကိုအထူးကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ၁ နာရီခွဲအားသွင်းရုံနဲ့ ၂ နာရီ ခွဲ ဆက်တိုက်အသုံးပြုနိုင်ပြီးအားသွင်းဗူးနဲ့ သုံးကြိမ်အထိအားပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပေးနိုင်လို တစ်နေကုန်စိတ်ကြိုက်အသုံးခံ သေးတယ်နော်။
Remax TWS-17 True Wireless Stereo Music Earbuds
Remax TWS-17 True Wireless Stereo Music Earbuds သည် ပြင်ပဆူညံမှုကိုလျော့ချပေးပြီး HiFi Sound စနစ်ကြောင့် အသံအရည်အသွေးကိုအထူးကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ၁ နာရီအားသွင်းရုံနဲ့ ၃ နာရီ ခွဲ ဆက်တိုက်အသုံးပြုနိုင်ပြီးအားသွင်းဗူးနဲ့ သုံးကြိမ်အထိအားပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပေးနိုင်လို တစ်နေကုန်စိတ်ကြိုက်အသုံးခံ သေးတယ်နော်။
Remax TWS-30 True Wireless Sterreo Gaming Earbuds
Remax TWS-30 True Wireless Sterreo Gaming Earbudsသည် ချိတ်ဆက်မူအမြန်ဆုံးBluetooth 5.0ပေါ့ပါးအကြမ်းခံတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါသည်။Battery 40mA ရှိသောကြောင့် စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Remax RL-LA08i Dual Lighting Audio Adapter
Remax RL-LA08i Dual Lighting Audio Adapter လေးကတော့ နားကြပ်ပေါက်မပါတော့ ဂိမ်းကစားနေတုန်း အားကုန်သွားရင် အားသွင်းရတာ အဆင်ပြေဘူး ဆိုတဲ့ ဂိမ်းမာတွေအတွက်ဂိမ်း ကစားရင်း အားသွင်းမယ် နားကြပ်လည်းတပ်ထားလိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီး ဇာတ်ကားကြည့်ရင် ဖုန်းကို ထောင်ပြီး ကြည့်လိုရတယ့် Stand လေးလည်းပါတယ် ဒီလို တကယ့်ကို အသုံးတည့်တဲ့3in 1 Audio Adaptor လေးဖြစ်ပါတယ်။
Remax RM-512A Type-C Earphone
Remax RM-512A Type-C Earphone လေးကတော့ TPE+ABS+Aluminum alloy နဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ Type C နဲ့လာ ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RM-750 ISO Gaming Earphone
Remax RM-750 ISO Gaming Earphone လေးကတော့ noise များကိုလျော့ချပေးနိုင်ပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသော အသံကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ game ဆော့သည့်အခါတွင်လည်း နောက်ကျ မှုမရှိဘဲ လှုပ်ရှားမှုအတိုင်းသွက်လျက်မြန်ဆန်နေမည် ဖြစ်ပါသည်။
Remax RCC-109 Kimbay Series Car Charger
Remax RCC-109 Kimbay Series Car Charger လေးကတော့ ကားပေါ်မှာ ဖုန်းအားသွင်းရတာ မြန်ဆန် သွားသလို ရေဒီယိုလိုင်းပါ ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပြီး SD Card နဲ့ ‌Memory Stick ပါအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RM-711 Wired Music Earphone
Remax RM-711 လေးကတော့ 14.2mm Bass Driven Speaker ရဲ့ အံ့မခန်း အသံထွက်နဲ့အတူ နားထဲ အလိုက်သင့်နေရာယူထားတဲ့ သက်တောင့်သက်သာ အရှိဆုံး နားကြပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။သီချင်းဖွင့်ပိတ် ၊ဖုန်းကိုင်ဖုန်းချ ၊သီချင်း အပုဒ်ကျော် အကုန် လုပ်လို့ ရတဲ့ ခလုတ်နဲ့ အသံအတိုးအချဲ့ထိန်းဖို့ Slide Button တစ်ခု ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Noise Reducing Microphone ဖြစ်တာကြောင့် ဆူညံမှုတွေလျှော့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RM-711A Type-C Wired Earphone
Remax RM-711A လေးကတော့ ဖုန်းခေါ်ဆိုတာ၊အသံအတိုး၊အလျော့တွေအတွက် Control Button ပါဝင်ပြီး ပြင်ပဆူညံ သံတွေကိုလည်းလျော့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RC-175i 100W 1M Type C to Lighting
Remax RC-175i သည် Lightning to Type-C Cable ပဲဖြစ်ပါသည်။ cable lengthကတော့ 1000mmလေးပဲဖြစ်ပါသည်။Output Currentအနေနဲ့ကတော့ 2.1 A လေးပဲဖြစ်ပါသည်။
Remax RL-LA03i iPhone Smooth3.5mm Audio
Remax RL-LA03i iPhone Smooth3.5mm Audio လေးသည် game ဆော့ရင်း အားလည်းသွင်းခြင်းနှင့်သီချင်းနားထောင်ခြင်းကို တစ်ပြိုင်နက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
Remax P30 Live Streaming Gimbal
Remax ကထုတ်တဲ့ P30 လေးကတော့ 360° Rotation အသုံးပြုနိုင်ပြီး တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်တဲ့ အချိန်မှာလဲ တည်ငြိမ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုရ လွယ်ကူပြီး အဆင်ပြေစေတဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
Remax RP-U51 i Phone Charger
Remax RP-U51 i Phone Charger လေးကတော့ Input Voltage ကို 100V~240V နှင့် Output Voltage ကို USB1:5V2.1A USB2:5V2.1A ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RPP 196 20000mAh power bank
Remax RPP 196 power bank သည် battery 20000mAh ပါဝင်ပြီး အားဝင်မူပုံစံကို digitalဖြင့်ပြပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ဖုန်းနဲ့ အလုပ်များများလုပ်ရသော လူကြီးမင်းတို့အတွက် အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ ပစ္စည်းလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Remax RM-598 earphone
Remax RM-598 earphone မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကြိုး earbuds ကောင်းမွန်စွာညှိထားသောအသံသွင်းဒီဇိုင်းနှင့် အထူး ကောင်းမွန်သောနားကြပ်ပဲဖြစ်ပါသည်။နားကြပ်ရွေးစရာအမျိုးမျိုးသည်ဆူညံသံကိုသီးခြားစီဖြစ်စေရန်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်။
Remax RC-009i Sury Series2 PD Fast Charging Cable
Remax RC-009i cable လေးကတော့ 18w PD fast charging ပါဝင်ပြီး TPE နဲပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကြိုးအရှည် ၁၀၀၀မီလီမီတာ ရှိပြီး Data ပါရလို့အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RPP-212 10000mAh Power bank
Remax RPP-212 10000mAh သည်း ဖုန်းနဲ့ အလုပ်များများလုပ်ရသော လူကြီးမင်းတို့အတွက် အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ ပစ္စည်းလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Remax RPP-213 20000mAh Tinyl Series 22.5W Power Bank
Remax RPP-213 သည် 20000 mAh batteryရှိပြီး ဖုန်းနဲ့ အလုပ်များများလုပ်ရသော လူကြီးမင်းတို့အတွက် အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ ပစ္စည်းလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Remax RM-598A Type-C Metal Earphone
Remax RM-598A သည်Baseသံကောင်းကောင်းနဲ့ နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် အသုံးပြုရအဆင်ပြေစေတဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
Remax RM-598i i Phone Metal Earphone
Remax RM-598i သည် Base သံကောင်းကောင်းနဲ့ နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် အသုံးပြုရအဆင်ပြေစေတဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
Remax RM-655A Type-C Metal Earphone
Type-C နားကြပ်လေး Pro ဆန်တဲ့ Bass သံထွက်ကို Support ပေးဖို့အတွက်Triangular Metal Ear Cavity နဲ့ ဖန်တီးထားပြီး JPZ 10109 Graphene Driver Unit အသုံးပြုပေးထားလို့ Bassသံ ကောင်းကောင်းနဲ့နားဆင် နိုင်ပါသည်။ Zinc Alloy Metal ခေါင်းလေးက အကြမ်းခံသလိုဖုန်းပြောဖို့လည်းအဆင်ပြေစေပါသည်။
Remax RB-T1 Wireless Headset
Remax ကထုတ်တဲ့ RB-T1 မှာတော့ Version 5.0 နဲ့ လာပေးထားပြီး Frequency:20-20KHz နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ အသံတွေကို နားထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RPP-259 20000mAh Power Bank
Remax RPP-259 Power Bank လေးကတော့ ABS (V0 grade)+PC နဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ Lithium Polymer ဘက်ထရီ အမျိုးအစားလေးဖြစ်ပါတယ်။ USB 2ခုပါဝင်ပြီး Micro,Type C စတာတွေနဲ့ အသုံးပြုလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Remax RPP-263 20000mAh Fast Charging Power Bank
Remax RPP-263 20000mAh Fast Charging Power Bank လေးကတော့ USB: max 22.5W ဖြစ်ပြီးတော့ Output Type C: 20W နှင့် Input Type C: 18W ဖြစ်ပါတယ်။
Remax RPP-215 15000mAh Power Bank
Remax RPP-215 လေးကတော့ ဒီဇိုင်းသေသပ်ပြီး Aluminum alloy ဖြင့်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။Battery Level ကိုတိတိကျကျပြပေးမယ့် LED မီးသီး (၄ခု)နဲ့ 60W PD TYPE-C SUPER Fast Charge ကို Input/Output (၂မျိုး)လုံး ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။USB Output (၂)ခု လုံး (18W) လည်း ရသေးတယ်နော်။ အာ့ကြောင့် ဖုန်း (၃)လုံး တပြိုင်နက် အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။
Remax RPP-200 50000mAh Fast Charging Power Bank
Remax RPP-200 လေးကတော့ Quick Charge 3.0, 22.5W အားအထွက်နဲ့ USB Output က(၁)ပေါက်၊10W အားအထွက်နဲ့ USB Outputက (၁)ပေါက်၊20W အဝင်အထွက်ရတဲ့ PD Type-C က တစ်ပေါက်နဲ့ ဖုန်း(၃)လုံးတပြိုင်နက်အားသွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလက်ကျန်ကို အမြဲပြပေးနေမယ့် LED Digital Display နဲ့ အရေးပေါ်အသုံးပြုဖို့ LED မီးသီးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RPP-199 30000mAh Fast Charging Power Bank
Remax RPP-199 လေးကတော့ (3)input and (6)output ကိုမှ(4)chargingcable ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Input (3)ခုမှာ - Micro / Type-C / USB တို့ဖြစ်ပြီး USB Output 18W Max နှင့် TYPE C Output 20W (max) နှင့်သွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။Micro/iPhone/Type-C - 10W နဲ့ USB Cable input - 10W ထိ ထွက်ရှိပေးထားပါတယ်။PD+QC Super Fast Charge ဖြစ်ပြီးBattery Level ကိုလည်း LCD Display မှ တိတိကျကျ ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါ တယ်။
Remax RB-X9 Wireless Speaker
Remax Little Boy RB-X9 Wireless Speaker မှာတော့ Wireless Version 5.0 ရှိပြီး 10 meters အကွာထိ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SD Card,Flash Drive,Aux,RGB စတာတွေ ပါ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် အရည်သွေးကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
Remax RM-C07 Handy Holder
Remax RM-C07 Holder လေးသည် Aluminum Alloy Material နဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ 5လက်မကနေ 13 လက်မအထိအကျယ်ချဲ့လို့ရပြီး 360 ဒီဂရီလှည့်လို့ရပါသည်။အတွင်းသားကိုလည်း Protective Silicon Pad သုံးပေးသည်။သူရဲ့ အထိုင်အညှပ်ကလေးကလည်း2လက်မ အမြင့်ထိ ချဲ့လို့တယ်ဆိုတော့ စားပွဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကုတင်ခေါင်းရင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာ ညှပ်ထားပြီး အသုံးပြုလို့ရသည်။
Remax RPP-266 80000mAh Power Bank
Remax RPP-266 Power Bank လေးမှာတော့ 80000 mAh Battery Capacity ပါဝင်ပါ တယ်။ ဖုန်း(၅)လုံးထိ တစ်ပြိုင်နက်အားသွင်းဖို့ USB 1 က 22.5W အားအထွက်..USB 2/3/4 တို့က 18W အားအထွက် နဲ့PD+QC PowerBank ဖြစ်ကြောင့် Type-C ပေါက်ကနေလည်း 20W အားအထွက်ထုတ်ပေးသည်။Power Bank ကိုအားပြန်သွင်းဖို့လည်း Type-C/ Lightning/ Micro ရှိတဲ့ ကြိုးနဲ့အားပြန်သွင်းရမှာဖြစ်သည်။LED Digital Display နဲ့ အား လက်ကျန်ကိုလည်း အမြဲကြည့်လို့ရတယ်....အားပြင်းတဲ့ LED Light ကလည်းအိမ်မှာ မီးပျက်တဲ့ အခါပဲဖြစ်ဖြစ် Camp တွေသွားတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် ဓာတ်မီးအဖြစ်အသုံးပြုလို့ရသေးသည်။
Remax RPP-180 20000mAh Power Bank
Remax RPP-180 Power Bank လေးမှာတော့ 20000 mAh Battery Capacity ပါဝင်ပါ တယ်။ LED Digital Display နဲ့ အား လက်ကျန်ကိုလည်း အမြဲကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားသွင်းချိန် ၁၆နာရီ ခန့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပြီး ABS+PC+V0 fireproof နဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RPP-183 30000mAh Power Bank
Remax RPP-183 Power Bank လေးမှာတော့ 30000 mAh Battery Capacity ပါဝင်ပါ တယ်။ LED Digital Display နဲ့ အား လက်ကျန်ကိုလည်း အမြဲကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားသွင်းချိန် ၁၃နာရီ ခန့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပြီး ABS + PC + fireproof PC နဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RPP-190 20000mAh Power Bank
Remax RPP-190 Power Bank လေးမှာတော့ 20000 mAh Battery Capacity ပါဝင်ပါ တယ်။ LED Digital Display နဲ့ အား လက်ကျန်ကိုလည်း အမြဲကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။22.5w PD/QC fast charging ပါဝင်တာကြောင့် အားသွင်းရာတွင်မြန်ဆန်စေမှာဖြစ်ပါသည်။
Remax TWS-29 Ultrathin True Wireless Earbuds
Remax TWS-29 လေးသည် Bluetooth Version V5.1 ဖြစ်ပြီးတော့ ABS နဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။၃နာရီလောက် အားသွင်းထားပြီးတော့ သီချင်းနားထောင်ချိန် ၄နာရီခွဲ ၊ဖုန်းပြောချိန် ၄နာရီ ထိအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပြီးအားသွင်းမယ်ဆိုရင်လည်း Micro ကြိုးလေးနဲ့သွင်း လို့ရမှာဖြစ်သည်။
Remax TWS-36 Retro Music Earbuds
Remax TWS-36 လေးသည် PC+ABS နဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ Bluetooth Version V5.1 ဖြစ်ပါတယ်။တစ်နာရီ ခွဲလောက် အားသွင်းထားပြီးတော့ သီချင်းနားထောင်ချိန် ၄နာရီ၊ဖုန်းပြော ချိန် ၄နာရီ ထိအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပြီးအားသွင်းမယ်ဆိုရင်လည်း Type C ကြိုးလေးနဲ့သွင်း လို့ရ မှာဖြစ်ပါသည်။
Remax RTS-30 Home Theatre Wireless Soundbar
40W HIGH-POWER ကို Bass Boosting 10mm Driver နဲ့ဆိုတော့ HIFI Dynamic Stereo Sound ရဲ့ Detail ကျကျအသေးစိတ်တွေကိုခံစားရရှိနိုင်ပါတယ်၊၊360' SURROUND SOUND နဲ့ဆိုတော့ တကယ်ပဲရုပ်ရှင်ရုံထဲရောက်နေတဲ့Feeling ကို အပြည့်အဝပေးနိုင်တာပေါ့...။အရှည် (၂)ပေကျော်ရှိတဲ့ Sound Bar ရဲ့ ဘေးတချက်မှာဆိုရင်Power / Mode Buttom | Play / Pause | Volume + / Volume -USB Port | TF Card Slot တို့ပါရှိပြီးနောက်ကျောဘက်မှာဆိုရင်တော့Wall Mount (2) Port | AUX Audio Input PortOptical Fiber Port | DC Power Port (18V.1.5A)Coaxial Port တို့ပါဝင်ပါတယ်၊၊Sound Barမှာ ပါဝင်တဲ့ ခလုတ်များဟာနှိပ်ရအဆင်ပြေလွယ်ကူပြီးPort များလည်း ထိုးသွင်းဖြုတ်တပ်ရတာ အဆင်ပြေတယ်၊၊နောက်ထပ် အကြိုက်ဆုံးအချက်ကတော့အရမ်းကို Premium ဆန်တဲ့ Remote Control ပါဝင်တာပါပဲ၊၊ဒီ Remote Control ရဲ့ အဓိကအသက်ကတော့ Music Modes နဲ့ Theatre Modes ပြောင်းလဲလို့ရနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Remax RB-800 HB Headphone
Remax RB-800 သည် အသံကိုလုံစေပြီးကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံကိုရရှိနိုင်ပါသည်။600mAh battery ဖြစ်သောကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Remax RPP-166 20000mAh Power Bank
RPP 166 20000mAh သည် ပေါ့ပါးသေးငယ်ပြီး..အားသွင်းမှုမြန်ဆန် စေပါသည်။ ပါဝါ 20000mAh ပါဝင် တာကြောင့် အားအကြာကြီးသွင်း ပြီး သုံးလို့ရတဲ့ အပြင် ဖုန်းနှစ်လုံးကို တစ်ပြိုင်နက် အားသွင်းနိုင်မှာဘဲ ဖြစ်ပါ တယ်။2USB,Type-C,Micro, Lighting port လေးတွေနဲ့ပါ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Remax Type-C RC-094A Kerolla Data Cable 2000mm
Remax ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ RC-094A မှာတော့ Type-C ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ချည်သားကြိုးဖြစ်တာကြောင့် ခေါက်ကျိုးမဖြစ်စေဘဲ အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ 2.1A နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Data ကူးတဲ့ အခါတွေမှာလဲ အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax Micro RC-094M Kerolla Data Cable 2000mm
Remax ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ RC-094M မှာတော့ Micro ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ချည်သားကြိုးဖြစ်တာကြောင့် ခေါက်ကျိုးမဖြစ်စေဘဲ အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ 2.1A နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Data ကူးတဲ့ အခါတွေမှာလဲ အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RC-119M(Micro)1000mm Cable
Gamer တွေ အတွက် အထူးသင့်လျော်တဲ့ ကြိုးလေးဖြစ်ပြီး 2.4A နဲ့ အလုပ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ 90%ဒီဂရီ အချိုး ပြုလုပ်ထားတဲ့ အတွက် Cable ခေါင်း လွတ်တာတွေ အတွက်လဲ အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ 480 MB/s Data ကူးပြောင်းနှုန်းတွေနဲ့မို့ အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RC-094i Kerolla i Phone 2000mm Cable
Remax ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ RC-094i မှာတော့ lighting ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ချည်သားကြိုးဖြစ်တာကြောင့် ခေါက်ကျိုးမဖြစ်စေဘဲ အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ 2.4A နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Data ကူးတဲ့ အခါတွေမှာလဲ အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RC-010 Sury Series2Type C To Type C Fast Cable
Remax RC-010 Sury Seriesမှာတော့ Type C ဖြင့် input /Output အသုံးပြုနိုင်ပြီး 3A Output ဖြစ်တာကြောင့် အားဝင်မြန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ 480 Mbpsနဲ့ Data transfer ပြုလုပ်တာကြောင့် အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RC-092M Kingpin Series Data Cable For Micro
Remaxကထုတ်လုပ်ထားပြီး RC-092M Kingpin Series Data Cable မှာတော့ Output 2.1 A နဲ့ အသုံးပြုနိင်ပြီး ခိုင်ခံ့ပြီး အကြမ်းခံတာကြောင့် အသုံးပြုရ အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RC-068 Type-C to Type-C 1M Data Cable
Remax ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ RC-068 မှာတော့ Type-C to Type-C အသုံးပြုနိုင်ပြီး 65W ဖြစ်တာကြောင့် Fast Charge ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Data Transmission 480 MB/S ရှိပြီး အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RC-181T 65W Charging 1000mm Data Cable
Remax ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ RC-181T မှာတော့ 65W Charging ဖြစ်တာကြောင့် လျင်မြန်တဲ့ အားဝင်နှုန်းနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Fast Charging ဖြစ်ပြီး Type-C to Type-C အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RC-181i Type-C to Lighting Zenax Series 20W PD Fast Charging Data Cable
Remax ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ RC-181i မှာတော့ 20W PD Charging ဖြစ်တာကြောင့် လျင်မြန်တဲ့ အားဝင်နှုန်းနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Type-C to Lighting အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အသုံးပြုရ အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RC-068i Zeron Series Type C To Lighting Cable (1M)
Remax ကထုတ်လုပ်ထားပြီး RC-068i မှာတော့ Type C To Lighting အသုံးပြုနိုင်ပြီး PD ဖြစ်တာကြောင့် iDevices တွေ အတွက်လဲ အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Output 20W ဖြစ်တာကြောင့် အားဝင်မြန်စေပြီး Data transmission 480 MB/S နဲ့ အသုံးပြုရ အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RM-C26 Phone Holder
Remax RM-C26 Phone Holder လေးသည် ကားဒက်ရှ်ဘုတ်၊ ရှေ့မှန်နှင့် ဒက်စ်တော့အတွက် သင့်လျော်သည်။သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး လက်တွေ့ကျကျ၊ ၎င်းသည် ကားမောင်းနေစဉ် သင့်အမြင်အာရုံကို ပိတ်ဆို့စေမည်မဟုတ်သောကြောင့် သင့်အား လုံခြုံမှုအပြည့်အဝပေးပါသည်။ခိုင်ခံ့သော suction cup ၊ buckle ကို သော့ခတ်ထားပြီး ဖန်ခွက်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ချိတ်ထားနိုင်စေရန် လေစုပ်ထုတ်ခြင်းမှ လေကို ဆွဲထုတ်ပါသည်။ချိန်ညှိနိုင်သော ဖုန်းကိုင်ဆောင်သူ၊ ကိုင်ဆောင်ထားသည့်အပိုင်းကို 360° လှည့်နိုင်သည်။
Remax RC-096A Type-C Leader Smart Display Data Cable
Remax RC-096A Type C Leader Smart Display Data Cable လေးကတော့ Alluminum Alloy + TPE ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ Output 2.1A Max ကိုသုံးပေးထားတာကြောင့်အားဝင်မြန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RL-LA07i Lighting Audio Adapter
Remax RL-LA07i Lighting Audio Adapter လေးသည် အားသွင်းခြင်းနှင့် သီချင်းနားထောင်ခြင်းကိုတပြိုင်ထဲပြုလုပ်နိုင်သည်။Adapter လေးသည်သေးငယ်သေးကြောင့် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူစေပါသည်။
Remax RPP-277 5000mAh Power Bank
Remax RPP-277 5000mAh Power Bank လေးသည် QC 18W နှင့် Output:5V/2.5A，9V/2A ပါဝင်ပြီး Wireless Support ရတဲ့ ဖုန်းတွေအတွက်လည်း Wireless နဲ့သွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါသည်။
Remax RPP-279 5000mAh Wireless Charging Power Bank
Remax RPP-279 5000mAh Power Bank လေးသည် 15W Wireless Output နှင့် 18W Fast Input/Output ပါဝင်ပြီး Wireless Support ရတဲ့ ဖုန်းတွေအတွက်လည်း Wireless နဲ့သွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါသည်။
Remax Type C To USB Hub RU-U5 (5 in 1)
remax usb hubလေးသည် 3.0 data rateရှိသောကြောင့် data များကိုလွယ်ကူစွာကူးယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Remax X5 Charging Adapter & Cable
Remax X5 Charging Adapter & Cable လေးသည် Input: 100-240V 50/60Hz 0.3A နှင့် Output: 5V-2.1Amax တို့ပါဝင်ပါသည်။
Remax RC-152 Micro Data Cable
Remax RC-152 Micro Data Cable လေးသည် ကြိုးအရှည် 1000မီလီမီတာ ရှိပြီးတော့ Output 2.4 A Max နဲ့ရရှိမှာပဲ ဖြစ်ပါသည်။
Remax RU-U91 Type C to HDTV9in 1 Multifunction Adapter
Remax RU-U91 လေးသည် aluminum alloy နဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ 3USB,Type C,3.5mm Audio Port,HDMI ပါဝင်ပါသည်။SD Card Slot ၊TF Card စတာတွေနဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Remax RT-A500 Pro Reqin Series Humidifier(1.2L)
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူစေပြီးမိမိရဲ့အခန်းထဲ (သို့) ရုံးခန်းထဲတွင်စိတ်တိုင်းကျ ထားနိုင်မည့် Humidifier minလေးဖြစ်ပါသည်။
Remax RP-U14 Type-C Charger
Remax RP-U35(Mic)JANE Series 2.1A Dual USB Charger Set
Remax RP-U35(Mic) Charger Setလေးသည် အားဝင်မြန်ဆန်သည့်အပြင် ဈေးလည်းတန်မယ်၊ အာမခံလည်းပါမယ်၊ တာရှည်လည်းခံမယ်ဆိုတော့ လူကြီးမင်းတို့ အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။ ဒါ့အပြင် DC5V-2.1A အပြည့်ထွက်ပြီးတော့ Data ရတဲ့အားသွင်းကြိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။ RP-U35(Mic) Charger Setဟာဆိုရင် Micro/ Type-C/ i Phone သုံးမျိုးလာပေးထားပါတယ်။
Remax RC-152 Type-C Data Cable
Remax RC-152 Type-C Data Cable သည် အရှည်၁မီတာရှိပြီး Output : 2.4A (MAX) နဲ့ရရှိမှာပဲ ဖြစ်ပါသည်။
Remax Type-C RC-094A Kerolla 1000mm Cable
Remax Type-C RC-094A Kerolla Cable လေးသည် ကြိုးအရှည် ၁၀၀၀မီလီမီတာ ရှည်လျားပြီး Output: 2.1A (Max) နဲ့ရရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်။
Remax RT-EM21 Aladdin Retro Humidifier(280ML)
Remax RT-EM21 ငွေ့ထုတ်စက်လေးက ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ခြောက်သွေ့တဲ့လေထုကို လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့အပြင် မီးအိမ်လေးအဖြစ်ပါ သုံးလို့ရပါတယ်။ ဒီဇိုင်းလေးကလည်း ရှေးခေတ်ပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့ ပုံပြင်ထဲကိုတောင် ရောက်သွားသလိုပါပဲ။ ဒီရေငွေ့ထုတ်စက်လေးရဲ့ Water Tank လေးကတော့ 280ML အထိ ဆန့်ပြီးတော့ အချိန်ကြာကြာအသုံးခံပါတယ်။ ကြိုးတပ်ထားစရာမလိုပဲ အားသွင်းပြီးအသုံးပြုရတာဆိုတော့ ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့။ Battery Capacity ကလေည်း 1200mAh ပါဝင်ပြီးတော့ ၃နာရီ/၄နာရီလောက်အထိ အားသွင်းထားမယ်ဆိုရင် ၆နာရီ/၈နာရီလောက်အထိကို အသုံးခံပါတယ်။ အားသွင်းကြိုးကလည်း Type-C ကြိုးဖြစ်ပြီးတော့ Filter တခုကိုလည်း အပိုထည့်ပေးထားသေးတယ်နော်။
Remax RPP-273 10000mAh Powerbank
Remax RPP-273 သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးခံနိုင်မည့် 10000mAh batteryပါဝင်ထားပါသည်။wireless ဖြစ်သောကြောင့် iphone စသည်တို့နှင့်လည်းချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ လွယ်ကူစွာအားသွင်းနိုင်ရန် type-C portပါဝင်ပြီး QC chargerဖြစ်သောကြောင့်အချိန်တိုတွင်းအားဝင်မြန်စေနိုင်မည့် powerbankလေးဖြစ်ပါသည်။
Remax RB-U35 iPhone Charger Set
Remax RB-U35 မှာတော့ 2.1A အားအထွက်နဲ့မို့ အားအဝင်ပုံမှန်ပဲဆိုတော့ Dual USB မှ တစ်ပေါက်ကို ဖုန်းအားသွင်းပြီး နောက်တစ်ခုကိုတော့ တခြား Device အမျိုးအစားတွေ အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။
Remax RCC323 49.5W Car Charger
Remax RCC323 မှာတော့ Power 49.5W နဲ့အသုံးပြုနိင်တဲ့ Car Charger လေးဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်း(၂)လုံးတပြိုက်နက်အားသွင်းတောင် Quick Charge ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Fast Charging ရတဲ့ Android ဖုန်းတွေဆို USB ဘယ်‌ Port ကသွင်းသွင်း Fast Charging ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RCC236 2.4A Car Charger
Remax RCC236 Car Charger မှာတော့ 2USB ပါဝင်ပြီး Output 5V-2.4A နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် အားဝင်လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RCC237 54W Car Charger
Remax RCC237 မှာတော့ 54 W နဲ့ Type-C , USB Port တွေနဲ့ အားသွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ USB Output - 5V=3A နဲ့ဖြစ်ပြီးType-C Output - 5V=3A နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RC-191 MARLIK Series 65W PD Fast Charging (Type-C to Type-C)
Remax RC-191 MARLIK Series မှာတော့ Power 65W နဲ့ဖြစ်တာကြောင့် Fast Charging အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Type-C To Type-C Cable အသုံးပြုနိုင်ပြီး Macbook တွေပါအသုံးပြုနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
Remax RC-150i (2.4A) iPhone Data Cable
Remax RC-150i မှာတော့ iDevices တွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး 2.4 A နဲ့ အလုပ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်လို့ အားဝင်မြန်တာကြောင့် အသုံးပြုရ အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RC-176i Janlon2Series Zinc Alloy Braided Gaming Data Cable For iPhone
Remax RC-176i မှာတော့ iDevices တွေ အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး 90 ° elbow design နဲ့ အားသွင်းတာရော ဖုန်းသုံးတာရော အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RC-089i Metal Data Cable 1000mm For iPhone
Remax RC-089i မှာတော့ iDevices တွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး Metalခေါင်းဆက်လေးကို အသုံးပြုထားတဲ့ အပြင် Fast Chargingတွက် Supportingကောင်းကောင်းပေးနိုင်တာမို့ အသုံးပြုရတာလဲ အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RC-094I Kerolla 1000mm iPhone Cable
Remax RC-094I မှာတော့ iDevices တွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး 2.1A နဲ့ အသုံးပြုနိင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းခံပြီး အသုံးပြုရ အဆင်ပြေတဲ့အတွက် အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RB-M59 Yosen Series Portable Wireless Speaker
speaker အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သလို Bluetooth နားကြပ်အဖြစ်လဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သယ်ဆောင်ရပေါ့ပါးလွယ်ကူစေသလို ကြည်လင်ပြတ်သားအသံ ပါဝါကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ stick, FM လိုင်းများနှင့်လဲချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းကောင်းလေးဖြစ်ပါသည်။
Remax RC-198 PD 65W Fast Charging
Remax RC-198 PD 65W Fast Charging Cable လေးတွေက Data ကူးဖိုအတွက်ဆိုရင်တော့ 480MB/s အမြန်နှုန်းနဲ့ ကူးပြောင်းပေးနိုင်တဲ့အပြင် Type-C to Type-C Cable လေးနဲ့ MacBook တွေနဲ့ ဖုန်းတွေကို အားသွင်းဖိုသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း PD 65W Fast charging အထိ Support ပေးပါတယ်။ Type-C to iPh ဆိုရင်လည်း PD 20W Fast charging အထိ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Remax RL-LA13i SURY AUDIO JACK
Remax RL-LA13i SURY AUDIO JACK သည် TPE + အလူမီနီယမ် အလွိုင်းနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ iPhone မှ 3.5mm jack ပြောင်းပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Remax RC-1644in 1 Cable
data များကိုလျှင်မြန်စွာကူးယူပေးနိုင်ပြီး USB, Type-C ,Lighting စသည်ဖြင့်လိုသလိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Remax RC-128a Type-C to Type-C Cable
Remax RC-128a သည် 100W ပါဝင်ထားသောကြောင့် အားဝင်မြန်စေနိုင်ပြီး အကြမ်းခံနိုင်သောကြိုးလေးဖြစ်ပါသည်။ 100W ဖြစ်သောကြောင့် mav book ,Pc စသည်တို့နှင့်လည်းချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Remax RL-LA12 Remine Phone Adapter 3.5MM To Lightning
နားကြပ်နှင့်အားသွင်းကြိုးတစ်ပြိုင်တည်း အသုံးပြုချင်သူများအတွက် remax မှထုတ်လုပ်ထားသည့် RL-LA12 သည်အကြမ်းခံပြီး အားလဲသွင်း သီချင်းလဲနားထောင် ၂ခုလုံးတစ်ပြိုင်ထဲပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Remax FS03 Portable Oscllating Fan
Remax FS03 Portable Oscllating C သည် ဘက်ထရီ 8000mAh ပါဝင်ပြီး 8.7hours အားသွင်းထားမယ်ဆို ၁၅ နာရီ ဆက်တိုက်အသုံးပြုလို့ရမှာ ဖြစ်ပါသည်။
Remax F44 Fan
Remax F44 Fan လေးသည် ဘက်ထရီ 4000mAh ပါဝင်ပြီး ၄နာရီကြာ အားသွင်းထားမယ်ဆိုရင် ၇နာရီလောက်အထိအသုံးပြုလို့ရမှာ ဖြစ်ပါသည်။Level 123 auto ဆိုပြီး လိုသလို လေအားကို ချိန်ညှိလို့ ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ ဖုန်းအားသွင်းဖို့ USB Output လဲပါဝင်ပါသည်။ပန်ကာလေးကိုအားသွင်းမယ်ဆိုရင်လဲ Type C နဲ့ပြန်သွင်းလို့ရမှာ ဖြစ်ပါသည်။
Remax F17 Fan
Remax F17 Fan (၄)လက်မ အရွယ်အစားထိ ခေါက်သိမ်းလို့လည်းရပြီး (၃၃)လက်မ ထိ ဆွဲဆန့်လို့လည်း ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စားပွဲပေါ်လည်း တင်ထားလို့ရမှာဖြစ်ပြီး ကြမ်းပြင်မှာလည်း ‌ထောင်ထားလို့ရပါတယ်။ စိတ်ကြိုက်အနေ အထား ကိုပါ Adjust လုပ်လို့ရပါတယ်။ လည်အားကောင်းတဲ့ ဒလက်ပန်ကာ (၅)ခုနဲ့ ပန်ကာလည်အား (၃)ဆင့်ထိ ချိန်ညှိရုံပဲ (၄)နာရီ ကနေ (၇)နာရီခွဲလောက်ထိ ဖွင့်ထားလို့ရပါတယ်။ အားပြန်သွင်းဖို့ကလည်း Micro USB နဲ့သွင်းလို့ရမှာ ဖြစ်ပါသည်။
Remax RT-E190 Dawn LED Eye Protection Lamp
Remax RT-E190 သည် Dawn LED Eye Protection ပါလို့ မျက်လုံးကို မှုန်ဝါးမှု ကိုကာကွယ်ပေးပါသည်။လိုအပ်သလို အလင်း အတိုးအလျော့လုပ်နိုင်ပြီး Touch sensor လေးနဲ့ဆိုတော့စတိုင်ကျနေပြီး ခေါက်ထားလို့ရတဲ့ မီးအိမ်တိုင်ပါဝင်လို့သယ်ယူရတာလည်း အဆင်ပြေစေပါသည်။6နာရီကနေ 13နာရီ ထိ အသုံးပြုနိုင်လို့ မီးပျက်လည်း စိတ်မပူရတော့ဘဲ USB type C နဲ့ အားသွင်းရုံပဲဆိုတော့ အရမ်းအဆင်ပြေလွယ်ကူစေပါသည်။
Remax RT-E185 Times LED Eye Protection Lamp
Remax RT-E185 လေးသည် အချိန်၊ ပြက္ခဒိန်၊ ရက်သတ္တပတ်နှင့် အပူချိန်တို့ကို ပြသသည့် LED Eye Protection မီးအိမ်လေးဖြစ်ပါသည်။
Remax RPP-168 10000mAh Lexi Series Power Bank
Remax RPP-168 Power Bankလေးသည် ပေါ့ပါးသေးငယ်ပြီး..အားသွင်းမှုမြန်ဆန်စေပါသည်။ ပါဝါ 10000mAh ပါဝင်တာကြောင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ 2USB,Type-C,Micro, Lighting port လေးတွေနဲ့ပါ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Remax RPP-272 22500mAh Hunyo2Series Power Bank
Mac Book နဲ့ Type-C အားသွင်းပေါက်ပါတဲ့ Laptop တွေကိုအားသွင်း့ဆို ဒီ ပါဝါဘဏ်ကိုသာရွေးချယ်လိုက်ပါ။65W အားအထွက်အပြည့်နဲ့့ အမြန်ဆုံးအားဖြည့်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းကလည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ (လုံးဝ) အကြမ်းခံတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ Mac Book တွေ Laptop တွေအားသွင်း့ 65W အားအထွက်အပြည့်နဲ့ PD Type-C က တစ်ပေါက်၊ iPhone တွေကို နာရီဝက်နဲ့ အားတစ်ဝက်ပြည့်စေမယ့် 20W အားအထွက်နဲ့ Type-C က တစ်ပေါက်၊ Android ဖုန်းနဲ့ တခြား Gadgets တွေအားသွင်းဖို့ 22.5W အားအထွက်နဲ့ USB က တစ်ပေါက်ဆိုပြီးတော့ စုစုပေါင်း Device (၃) ခုထိ တပြိုင်နက်အားသွင်းလိုရပါတယ်။သူ့ရဲ့ ထူးခြားချက်က ဖုန်း(၂)လုံးတပြိုင်နက်အားသွင်းရင်တောင် Quick Charge နဲ့သွင်းနိုင်တဲ့အပြင် Power Bank ကို အားပြန်သွင်းမယ်ဆိုရင်လည်း PD Type-C ပေါက်ကနေပဲသွင်းနိုင်ပြီးတော့ Power Bank အားပြန်ပြည့့် (၂)နာရီကျော်ပဲကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။(65W Charger နဲ့သွင်းဖိုတော့လိုပါမယ် အားလက်ကျန်ကိုလည်း LED Display နဲ့ကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
Remax RP-U73 Kings 65W Fast Charger
65W အားအထွက်နဲ့ Phone တွေအပြင် Macbook နဲ့တခြားသော Type-C ပါတဲ့ Laptop တွေကိုပါ အားသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Device နှစ်ခုလုံးကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း အားသွင်းလို့လည်းရတယ်။Type C(65W Max) နဲ့ USB-A(65W Max) စုစုပေါင်း Output နှစ်ပေါက်ပါဝင်တယ်။QC 3.0 ကနေ 65W အားအပြည့်နဲ့ Fast Charging Support ပေးတဲ့ Andriod Flagship Phone တွေကို အမြန်ဆုံးအားဖြည့်ပေးနိုင်တယ်။တစ်ပေါက်တည်းနဲ့ အားသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ 65W အားအပြည့်ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး တစ်ပြိုင်နက်တည်း အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ Type-C Output ကနေ 45W နဲ့ USB ပေါက်ကနေ 18W ထိ ရရှိဦးမှာဆိုတော့ နှစ်ပေါက်လုံးပြိုင်တူထိုးထားလည်း Fast Charge နဲ့ အားအမြန်သွင်းပေးနိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါသည်။
Remax RP-U53 Hoyin 65W Gan Charger
Remax RP-U55 Hoyin 65W Gan Charger
RP-U55 65W GaN Fast Charger လေးသည် Device (၃)ခု တပြိုင်တည်းအားသွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Macbook တွေကို 65W High-power နဲ့ အမြန်ဆုံးအားသွင်းပေးတယ်။USB A(60W)တစ်ပေါက်၊ Type-C (60W,65W) နှစ်ပေါက်နဲ့ Phone, Tablet, Macbook တွေကို တချိန်တည်းအားသွင်းရင် 62W output နဲ့ အားဝင်မြန်ချက်ပဲ။Fireproof body နဲ့မို့ အားလွန်ကဲမှု မဖြစ်စေဘူး။ ဖုန်းအားပြည့်ရင် အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ပေးတဲ့ စနစ်ပါရှိတာမို့ ဖုန်းထိခိုက်မှာ စိတ်ပူစရာမလိုပဲ စိတ်ချလက်ချအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Remax RPP-287 10000mAh PowerBank
Remax RPP-287 သည် 10000mAh ပါဝင်ပြီးမီးပျက်သွားချိန်တွေမှာ အေးဆေး အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပေါ့ပါးသောကြောင့်အပြင်သွားလျှင်လည်းဖုန်းနဲ့မကွာအသုံးပြနိုုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။18W USB Outputပါဝင်သောကြောင့် ဖုန်း (၂)လုံးတစ်ပြိုင်ထဲအားသွင်းနိုင်ပါသည်။
Remax RPP-288 20000mAh Powerbank
Remax RPP-288 သည်20000mAh သိုလှောင်နိုင်တဲ့အတွက် မီးပျက်သွားချိန်တွေမှာ အေးဆေး အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။20W PD ဖြစ်သောကြောင့်အားဝင်မြန်စေနိုင်ပြီး အချိန်ကုန်သက်သာစေနိုင်ပါသည်။18W USB Outputပါဝင်သောကြောင့် ဖုန်း (၂)လုံးတစ်ပြိုင်ထဲအားသွင်းနိုင်ပါသည်။
Remax RPP-289 30000mAh
Remax RPP-289 သည် 30000mAh သိုလှောင်နိုင်တဲ့အတွက် မီးပျက်သွားချိန်တွေမှာ အေးဆေး အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 20W ဖြစ်သောကြောင့် အားဝင်မြန်စေနိုင်ပြီး အချိန်ကုန်သက်သာစေနိုင်ပါသည်။18W USB Outputပါဝင်သောကြောင့် ဖုန်း (၂)လုံးတစ်ပြိုင်ထဲအားသွင်းနိုင်ပါသည်။
Remax RPP-60 10000mAh Power Bank
Remax RPP 60 သည် 10000mAh ပါဝင်ပြီး မီးပျက်သွားချိန်တွင် အေးဆေးအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပေါ့ပါးသောကြောင့် အပြင်သွားလျှင်လည်းဖုန်းနဲ့မကွာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Remax RPP 68 20000mAh Power Bank
Remax RPP 68 20000mAh Power Bank လေးသည်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် 20000mAh Battery ပါဝင်ပါသည်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး အကြမ်းခံသောကြောင့် အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေသောပစ္စည်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Remax F26 Finlin Handheld Fan
Remax F26 mini Hndheld Fan လေးသည် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး အသုံးပြုရအဆင်ပြေစေသောပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါသည်။
Remax RB-M6 Speaker
Remax RB-M6 Speaker လေးသည် ကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံများကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါသည်။
Remax RPP-291 80000mAh Chinen Power Bank
Remax RPP-291 Power Bank လေးမှာတော့ 80000 mAh Battery Capacity ပါဝင်ပါသည်။ LED Digital Display နဲ့ အား လက်ကျန်ကိုလည်း အမြဲကြည့်လို့ရတဲ့အပြင် အားပြင်းတဲ့ LED Light ကလည်းအိမ်မှာ မီးပျက်တဲ့ အခါပဲဖြစ်ဖြစ် Camp တွေသွားတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် ဓာတ်မီးအဖြစ်အသုံးပြုလို့ရသောကြောင့် အဆင်ပြေသော ပစ္စည်းကောင်းလေးတခုဖြစ်ပါသည်။
Remax RL-LA11A Phone Adapter Dual Type C
Remax RL-LA11A Phone Adapter Dual Type C တွင် 30W fast charging, fast full battery,2Type-C ports တို့ပါဝင်ပြီး မိမိလိုသလိုအသုံးပြု၍ရသော ပစ္စည်းလေးတခုဖြစ်ပါသည်။
Remax RPP-175 20000mAh Power Bank
Remax RPP-175 သည် 20000mAh သိုလှောင်နိုင်တဲ့အတွက် မီးပျက်သွားလဲအေးဆေးအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပေါ့ပါးသောကြောင့်အပြင်သွားလျှင်လည်းဖုန်းနဲ့မကွာအသုံးပြနိုုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။18W USB Outputပါဝင်သောကြောင့် ဖုန်း (၂)လုံးတစ်ပြိုင်ထဲအားသွင်းနိုင်ပါသည်။
Remax RPP-145 10000mAh Power Bank
Remax RPP-145 သည် 10000mAh ပါဝင်ပြီး မီးပျက်သွားချိန်လဲ အေးဆေးအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီးအသူံးပြုအဆင်ပြေစေတဲ့အပြင် 18W USB Outputပါဝင်သောကြောင့် ဖုန်း (၂)လုံးတစ်ပြိုင်ထဲအားသွင်းနိုင်ပါသည်။
Remax RPP-278 10000mAh Power Bank
Remax RPP-278 Power Bank လေးသည် 10000mAh ပါဝင်ပြီးအချိန်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး အပြင်သွားချိန်တွင်လည်းဖုန်းနဲ့မကွာအသုံးပြုနိုင်သောကြောင့်အသုံးပြုရအဆင်ပြေစေသော ပစ္စည်းကောင်းလေးတခုဖြစ်ပါသည်။
Remax RPP-257 30000mAh Power Bank
Remax RPP-257 သည် Battery Capacity အနေဖြင့် 30000mAh ပါဝင်သောကြောင့် မီးပျက်သွားလဲအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါသည်။ အားလက်ကျန်ဘက်ထရီကို တိတိကျကျဖော်ပြပေးမယ့် LED Display နဲ့ ဖြစ်ပါသည်။
Remax RPP-85 10000mAh Power Bank
Remax RPP-85 သည် Battery Capacity အနေဖြင့် 10000mAh ပါဝင်ပြီး မီးပြတ်သွားလဲအေးဆေးအသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါသည်။ Type-C Input - 5V-3A/ 9V-2A/ 12V-1.5A 18W(MAX) နဲ့ USB Output- 5V-4.5A/ 9V-2A/ 12V-1.5A 22.5W(MAX) တို့ပါဝင်ပါသည်။
Remax RPP-216 10000mAh Power Bank
Remax RPP-216 လေးကတော့ Battery Capacity 10000mAh ပါဝင်ပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါသည်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး အပြင်သွားလျှင်လည်းဖုန်းနဲ့မကွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။တချိန်ထဲမှာပဲ ဖုန်းနှစ်လုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းအားသွင်းနိုင်သောကြောင့် အဆင်ပြေစေသောပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါသည်။
Remax RPP-103 30000mah Power Bank
Remax RPP-103 လေးသည် Battery Capacity 30000mAh ပါဝင်ပြီး မီးပျက်သွားလဲ အချိန်အတော်ကြာအသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါသည်။ အားလက်ကျန် Battery ကိုတိတိကျကျဖော်ပြပေးမယ့် LED Display လေးပါပါသေးတာမို့ အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေစေသော ပစ္စည်းလေးတခုဖြစ်ပါသည်။
Remax RPP-231 10000mah Power Bank
Remax RPP-231 သည်10000mAh သိုလှောင်နိုင်တဲ့အတွက် မီးပျက်သွားချိန်တွေမှာ အေးဆေး အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Input အနေနဲ့ Type-C / Micro ဖြစ်ပြီး Output မှာဆိုရင်တော့ USB /Type-C ပါဝင်ပါသည်။
Remax RPP-198 10000mAh Power Bank
Remax RPP-198 လေးကတော့ Battery Capacity 10000mAh ပါဝင်ပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါသည်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး အပြင်သွားလျှင်လည်းဖုန်းနဲ့မကွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။တချိန်ထဲမှာပဲ Devices 3ခုကိုတပြိုင်နက်တည်းအားသွင်းနိုင်သောကြောင့် အဆင်ပြေစေသောပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါသည်။
Remax AWP-01 10000mAh Power Bank
Remax AWP-01 လေးကတော့ Battery Capacity 10000mAh ပါဝင်ပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါသည်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး အပြင်သွားလျှင်လည်းဖုန်းနဲ့မကွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Input Voltage: DC5V/2.0A နဲ့ Output Voltage: DC5V/2.1A တို့ပါဝင်ပါသည်။
Remax RPP-267 20000mAh Power Bank
Remax RPP-267 သည် 20000mAh သိုလှောင်နိုင်တဲ့အတွက် မီးပျက်သွားလဲအေးဆေးအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပေါ့ပါးသောကြောင့်အပြင်သွားလျှင်လည်းဖုန်းနဲ့မကွာအသုံးပြနိုုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။အားလက်ကျန် Battery ကိုတိတိကျကျဖော်ပြပေးမယ့် LED Display လေးပါပါသေးတာမို့ အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေစေသော ပစ္စည်းလေးတခုဖြစ်ပါသည်။
Remax RPP-220 Power Bank
Remax RPP-220 လေးကတော့ Battery Capacity 19200 သိုလှောင်နိုင်သောကြောင့် မီးပျက်သွားလည်း အချိန်အတော်ကြာအသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါသည်။ ဖုန်းတွေအတွက်အသုံးပြုနိုင်ရုံသာမက Laptop များအတွက်ပါအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ တချိန်တည်းမှာပဲ Devices 3ခုကိုအသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် အဆင်ပြေစေသောPower Bank လေးဖြစ်ပါသည်။
Remax RPP-296 20000mAh Landon 2.1A Power Bank
Remax RPP-296 သည် 20000mAh သိုလှောင်နိုင်တဲ့အတွက် မီးပျက်သွားလဲအေးဆေးအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပေါ့ပါးသောကြောင့်အပြင်သွားလျှင်လည်းဖုန်းနဲ့မကွာအသုံးပြနိုုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။Power Bank လေးကိုအားပြန်သွင်းမယ်ဆိုရင်လဲ Micro,Type C ၂မျိုးလုံးနဲ့သွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါသည်။